विद्याको उम्मेदवारीसँगै स्थानीयमा उत्साह ! ८५ वर्षीया वैकुण्ठनाथ भन्छन,- विद्याभित्र रवीन्द्र देख्छौँ « Dhankuta Khabar
विद्याको उम्मेदवारीसँगै स्थानीयमा उत्साह ! ८५ वर्षीया वैकुण्ठनाथ भन्छन,- विद्याभित्र रवीन्द्र देख्छौँ
कास्की क्षेत्र नं २ को प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराईको उम्मेदवारीले रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको जन्मस्थान भरतपोखरीवासी खुशी भएका छन् । “आफ्नो माटोमा जन्मे हुर्केर राजनीति उचाइमा पुगेको गाउँको लोकप्रिय छोरो गुमाउनुपरेको पीडालाई भुल्न गाह्रो भए पनि विद्याको उम्मेदवारीले केही खुशी ल्याएको छ ।” स्थानीयवासी ८० वर्षीया पूर्णकुमारी आचार्यले भन्नुभयो । “मैले जीतको शुभकामना दिएँ, विद्या हाम्री छोरी हुन्, अब राष्ट्रकै छोरी भएर सफल भएको देख्ने चाहन्छौँ”, आचार्यले भन्नुभयो ।
अधिकारीको निधनपछि निराश स्थानीय बासिन्दा भट्टराईको उम्मेदवारीसँगै उत्साहित बनेका छन् । आफ्नो चुनावी अभियान शुरू गर्न गृहस्थान पुग्नुभएकी भट्टराईलाई स्वागत गर्दै उक्त ठाउँका बासिन्दाले अधिकारीको सपना पूरा गर्न र समग्र देशलाई समृद्धिपथमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । भट्टराईले अधिकारीलाई राजनीतिक उचाइमा पु¥याउन आफू पर्दा पछाडि बसेर राजनीतिक योगदान गरिरहेको बताउनुभयो । “आज पार्टीले त्यो योगदानको कदर गर्दै मलाई उम्मेदवार बनाएको छ, अब हजुरहरुले साथ दिनुस्”, भट्टराईले भन्नुभयो ।
कास्की क्षेत्र नं २ का जनताको भरोसा र विश्वासलाई कहिल्यै डगमगाउन नदिने भन्दै उहाँले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई शोकलाई शक्तिमा बदलेर निर्वाचनको अभियानमा सरीक हुन आग्रह गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीले पार्टीकी क्षमतावान् र बौद्धिक नेत्री भट्टराई राजनीतिक चेत भएको कुशल उम्मेदवार भएको बताउनुभयो ।
सं,कटमा परेका धनकुटाका पत्रकारलाई सांसद राजेन्द्र राईको १ महिनाको तलब
काखको छोरी माइतीमा छाडेर कोरोना अस्पतालको नेतृत्व गर्दै डा. शान्ति…
धनकुटामा फेरी १ जना कोरोना सं,क्रमित थपिए – कुल संख्या…